Iklabhu yeLoch Rannoch yasezintabeni ikwilali entle yaseKinloch Rannoch, ebekwe phakathi kweendawo eziphakamileyo ezimangalisayo kunxweme lweLoch Rannoch, Iindawo zokulala zinobubele bezilwanyana zasekhaya kwaye zonke zineembono ezintle zeLoch, zonke iindawo zokulala zine-wifi yasimahla. kwaye zime ngokufanelekileyo zombini indawo yokuphumla kunye nokuhamba, ukuloba, ukukhwela ibhayisekile, ukukhwela amahashe kunye neminye imisebenzi yangaphandle. Le ndawo ilikhaya kwezinye zezilwanyana zasendle ezinqabileyo zase-UK ezinje ngeRed Squirrels, iGolden eagles kunye nePine Martin.
I-Lochside 7 yindawo yokulala encinci elungele abantu abadala ababini kunye nabantwana ababini Kukho igumbi lokulala elineebhedi ezininzi kunye nebhedi yesofa ephindwe kabini kwigumbi lokuphumla. Kukho indawo eninzi yokugcina kunye nendawo yokuxhoma, izifudumezi zepaneli zomntu ngamnye, iindawo zombane kunye nezibane zokufunda.
Igumbi lokuhlambela linebhafu egcweleyo, eneshawa kunye neWC. Isitya sokuhlambela sinendawo yokukhanyisa kunye nendawo yokucheba phezu kwayo, isiporo sethawula eshushu kunye nefeni yokukhupha.
Igumbi lokuhlala elidibeneyo kunye negumbi lokutyela lineembono ezintle ezivulekileyo. Ingaphakathi lifakwe ngokunambitheka kwaye libandakanya itafile yemidlalo, isuti yesikhumba kunye nezibane ezithambileyo ezibonelelwa zizibane. Indawo yokutyela inebar yesidlo sakusasa. Zonke iindawo zokulala ziyaxhamla “kukubona simahla” umabonakude, iDVD/VCR eyicombi kunye neemfonomfono ezicofa ngokuthe ngqo eziquka ivoyisimeyili. Zonke iindawo zokulala zixhotyiswe ngeWiFi yaMahla, nazo zonke iibhedi neetawuli. Ikhitshi elifakwe ngokupheleleyo licocekile kwaye lixhotyiswe kakuhle kwaye linazo zonke izixhobo zangoku, kubandakanya i-oveni egcwele ubungakanani kunye nehobhu, ifriji / isikhenkcezisi, i-oveni yemicrowave kunye nomatshini wokuhlamba izitya. Kukho uluhlu olupheleleyo lwezitya, i-cutlery, i-glassware kunye nezixhobo zokupheka.
Le loji inokufikelela kwisauna ekwabelwana ngayo.
Kukho ibalcony ejonge eLoch Rannoch.
Le Loji inokufikelela lula njengoko indawo yokulala kunye negumbi lokuhlambela zombini zikumgangatho ophantsi.
I-ayini, ii-Cots kunye nezitulo eziPhezulu ziyafumaneka xa uceliwe
IKinloch Rannoch yilali encinci esekwe kwindawo enobuhle obubalaseleyo obujonge eLoch Rannoch, lo mmandla ujikelezwe ziinduli eziphakamileyo kunye nenye yeentsalela zokugqibela zamahlathi amadala aseCaledonian pine, kukho intabalala yezilwanyana zasendle ezibandakanya iRed Squirrels ezinokudla ngokuhlala. zibonakale zithe saa iigadi, iPine Martin, Golden Eagles, Osprey, Red Deer and Otters, Kukho iimunro ezininzi kulo mmandla kubandakanya iSchiehallion kunye nokuhamba ngokulula kwinqanaba eliphantsi. Yindawo "yeSibhakabhaka esiMnyama" ubusuku obucacileyo bunika umbono omangalisayo weenkwenkwezi kunye nendlela yobisi kwaye ukuba unethamsanqa ngamanye amaxesha unokufumana umbono weAurora Borealis [Izibane zaseMantla]
Indlela esentshona esuka eKinloch Rannoch ikusa kwisikhululo saseRannoch apho unokubamba khona uloliwe kuhambo losuku oluya eMallaig kwindlela eWest Highland ivotele lolona hambo lubalaseleyo lukaloliwe emhlabeni.
Thatha indlela esempuma kwaye ufike eBlair Atholl eneBlair Castle edumileyo kunye nePitlochry kunye nethiyetha yethiyetha, iivenkile kunye neWhisky Distilleries.
Kubathandi bemidlalo ephezulu ye-adrenaline sifikeleleka ngokulula kwi-Skiing, ukukhwela amanzi amhlophe, i-canyoning, i-tubing yomlambo, ukuhamba kwegorge, ukukhwela ibhayisekile ye-quad, ukudutyulwa kwehobe lodongwe, i-segways kunye ne-pony trekking.